इटहरीका मेयर र अख्तियार प्रमुखलाई खुला पत्र
५९६६ पटक पढिएको
आदरणीय चर्चित मेयर सा’ब !
श्रीमान् अख्तियार प्रमुखज्यू !
पछिल्लो समय चर्चाको शिखरमै पुग्नुभएको मेयर सा’बप्रति फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु । म तपाईंकै नगरवासीको हिसाबले तपाईंको चर्चा शिखरबाट पातालमा नपुगोस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु ।
इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँजस्तो गरिमामय पदको व्यक्तिले भनेपछि मलाई पनि केही प्रश्न गर्न मन लाग्यो । सर्वप्रथम त म अख्तियार प्रमुखज्यूलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु ।
मिति २०७४ मंसीर २ गते दर्ता नम्बर १०१६, १०१७, १०१८ का ३ वटा निवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीमा हामीले दर्ता गरायौँ । मेयर सा’बसँग सीएफएल बत्ती खरीदमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा हामीले अगाडि नै कुरा गरिसकेका थियौँ ।
उहाँले बेवास्ता गरेपछि हामीले अख्तियार जाने निर्णय ग¥यौँ । म आफैँ अख्तियार पुगेर उजुरी दिएँ । उजुरी दर्ता गराएर गेटमा आइनपुग्दै इटहरी उपमहानगरका कर्मचारीको फोन आयो । उनले फोनमा ‘अख्तियारमा उजुरी हालिएछ नि !’ भने । म छक्क परेँ । मलाई अख्तियारप्रति नै शङ्का लाग्यो । यो कुरा कसरी ती कर्मचारीले थाहा पाए भन्ने प्रश्न मेरो मनमा आयो । अख्तियारकै कर्मचारीको मिलेमतोमा कुरा बाहिर आयो भन्ने शङ्का लाग्यो ।
त्यसपछि म आफैँ धेरै पटक अख्तियार गएर निवेदनको फलो गरेँ । सीएफएल बल्ब भ्रष्टाचार प्रकरणको लागि अनुसन्धानमा खटिएका तत्कालीन डीएसपी नवराज कार्कीलाई बारम्बार फोन गरेँ । उनले कुनै वास्ता गरेनन् । बरु केही दिनसम्म फोन सम्पर्कबाहिर बसे उनी । धेरै नै ‘इग्नोर’ गरे उनले । मैले पहिले पनि कर्मचारी बीचमा मिलेमतो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ । पछि त्यस्तै पो हो कि भन्ने शङ्काको वातावरण बन्यो । म निवेदक भएकै हिसाबले पनि अख्तियारमा गएर धेरै पटक बयान दिएको छु । मेयर र कर्मचारीलाई पनि अख्तियारले बयान लियो ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले गठन गरेको छानबिन समितिले पनि २० लाख भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिना कारबाही भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिएकोमा मलाई दुःख लागेको छ । यसले अख्तियारप्रतिको मेरो विश्वास र भरोसामा चोट पुगेको छ । मजस्तै धेरै इटहरीवासीको विश्वास गुमेको छ । मैले सुनेको र अख्तियारको व्यवहार एउटै लाग्यो । अख्तियारमा पनि मिलेमतो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ । त्यस्तै भएजस्तो लाग्यो ।
मलाई थाहा छ ८५ वाटको बत्ती जडान गर्ने भन्दै ६५ वाटको बत्ती जडान गरिएको थियो । जुन कुरा अख्तियारको टोलीलाई समेत थाहा थियो । अख्तियारकै कर्मचारीले बिजुलीको पोलमा चढेर बत्तीको जाँच गरेका थिए । यति धेरै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि किन कारबाही भएन ? मलाई बारम्बार यही प्रश्नले खेदिरहेको छ । अहिले मेयर सा’बले यसै विषयमा अख्तियारलाई प्रश्न गरिरहनुभएको छ ।
जनप्रतिनिधि आउँदै गर्दा खरीद गरिएका फर्निचरमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियरमा पुन निवेदन दिएका थियौँ । जुन अहिले पनि अख्तियारको दराजमा भेटिन्छ होला शायद । त्यसको अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । शेरा खोला तटबन्धन र डिजेल पेट्रोलमा अनियमितता भएको भन्दै दिएको अर्को निवेदन पनि अख्तियरमा थन्किएर बसेको छ ।
मेयर सा’बले अख्तियारले केही नगर्ने भन्दै हल्ला फिँजाउनु भयो । अहिले उहाँ चर्चित बन्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उहाँको यही अभिव्यक्ति भाइरल भएको छ । तर त्यसभित्रको सत्य कुरा उजागर हुन जरुरी छ ।
म उहाँले आरोप लगाउनुभएका पत्रकारहरूलाई राम्ररी चिन्छु । पत्रकारसँग जे व्यवहार गर्नुभयो त्यो गलत गर्नुभयो । जसले भ्रष्टाचारको विषय बाहिर ल्यायो त्यसैको विरुद्धमा लाग्नुभयो । मलगायत केही साथीले यो विषय बाहिर ल्यायौँ । तर हाम्रै विरुद्धमा मेयर सा’ब लागिरहनुभएको छ । हामी तपाईं मेयर बन्नुभन्दा पहिलेदेखि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा लागेका थियौँ ।
हामीले नै बाहिर ल्याएको विषयमा अहिले गोयबल्स शैलीमा प्रचार गरिरहनुभएको छ । तपाईले दिएका हरेक अन्तर्वार्तामा सीएफएल प्रकरण जोडिएका छन् । हामीले नै भ्रष्टाचार भएको कुरा बाहिर ल्यायौँ तर हामीलाई नै दुस्मनजस्तो व्यवहार गरिरहनुभएको छ । अनि हामीलाई नै भ्रष्टाचारको सपोर्ट गरेको भन्ने ? अलिक मर्यादा राखेर बोलेको भए हुनेथियो मेयर सा’ब ।
सीएफएल प्रकरण बाहिर आउनुभन्दा ७ दिन अगाडि तपाईँलाई विराट अनुपम र होमनाथ धमलाले भेटेको हो कि होइन ? सो भेटमा सीएफएलमा भ्रष्टाचार छ भन्दा तपाईले विचार गरौँला भन्दै पन्छाएको होइन ? अनि अहिले त्यही कुरा बाहिर ल्याउने पत्रकार र हामीमाथि जाइलाग्ने कुरा अलि अपाच्य भयो मेयर सा’ब ।
तपाईं आफैँले भ्रष्टाचारी संस्थालाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइरहनुभएको छ । पहिले इन्भारो केयरमा भ्रष्टाचार भएको कुरा बाहिर आएकै हो । तर त्यसैको परिवर्तित नाम वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई अहिले तपाईंले नै फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुभएको छ । के यो भ्रष्टाचारको प्रश्रय गरेको होइन ?
करोडौँ खर्च गरेर बनेको ल्याण्डफिल साइटको उपयोग खोइ ? चारकोसे जङ्गल मासेर फोहोर फ्याँक्ने अनि हजारौँ जनतालाई सास्ती दिने तपाईं चाहिँ कति सदाचारी हो मेयर सा’ब ? केही भावनात्मक र आक्रोशित कुरा गरेर केही दिन भ्रम छर्न सकिएला तर भ्रमले नगरको विकास हुँदैन मेयर सा’ब । विकास गर्नको लागि योजना र टिमको आवश्यकता पर्छ । तपाईंमा त्यसैको अभाव देखिएजस्तो लाग्छ मलाई ।
शुरुमैै तपार्इंले सार्वजनिक जग्गा खोजी अभियान थाल्नुभयो । तर केही दिनमै अभियान तुहियो । योजनाविहीन निर्णय प्रायः यसरी नै तुहिन्छन् मेयर सा’ब ।
तपाईंले निकै सदाचार र पारदर्शिताको कुरा गरेको सुनेँ । तर अहिले पनि हामीले ५० वटा भन्दा धेरै निवेदनबाट सूचना माग गरेका छौँ । अहिलेसम्म एउटा पनि सूचना पाउन सकेका छैनाँै । हामीले ‘तपाइंका कर्मचारीले सूचना दिँदैनन् भनिदिनुप¥यो’ भन्यौँ । नभए हामी सूचना विभागमा उजुरी दिन्छाँै भन्दा ‘देओ मलाई केही मतलब छैन । म वारेसनामा दिएर कर्मचारीलाई पठाउँछु’ भनेको होइन र ? अहिले आएर सुशासन र सदाचारका कुरा गर्न सुहाँउछ र ? सुहाउँदैन नि होइन र मेयर सा’ब ?
अन्त्यमा, अख्तियारका प्रमुखज्यू हामीले दिएका निवेदन प्रति सुनुवाइ होस भन्ने पुनः निवेदन गर्न चाहन्छु । जनतामा गुमेको अख्तियारप्रतिको भरोसा पुनर्जीवित हुन सकोस् भन्ने कामना गर्दछु्ु ।
मेयर सा’ब म तपाईंको नगरवासी र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको सहयोगी पनि हुँ । तपाईंको अभियानमा सहयोग गर्न म तयार छु । तर त्यसको लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम गर्न जरुरी छ । जुन आजैबाट शुरु गरौँ । तपाईले बोलेका कुराको व्यावहारिक परीक्षण जनताले खोजिरहेका छन् । जनताको आशा, अपेक्षा र विश्वासमा घात नहोस् । शु्भकामना !